Izithuba zekhonkrithi → Indawo yokupaka iimoto • Ucingo oluhleliyo • I-Ultratense Concrete®
Uyilo oluncinci yenza kancinci izinto zokwakha zidityaniswe Isithuba seDolophu okanye ubekwe kwipropathi yabucala kwaye unike umntu othile kwindawo ayinikiweyo. Izithuba zekhonkrithi, yanamhlanje iibhentshi, sheds, iitafile, iintyatyambo ngeentyatyambo, Imigqomo yenkunkuma, Ukuma ngebhayisekile, ukugubungela umthi kunye neendawo zokudlala zenza ukuba indawo ihlale yodwa, intle kwaye iyasebenza.
Izinto ezinjalo zikwizikhundla zekhonkrithi ezibekwe kwindawo yedolophu kwaye Isithintelo esijikelezayo kwindawo enikezwe. Ziyinto ezihlobisa ngayo kwaye kwangaxeshanye zizalisekisa umsebenzi obalulekileyo, zithintela ukupaka kwiindawo ezingafanelekanga.
Iindidi zoyilo zivumela ukukhethwa kwezithuba zekhonkrithi ezihambelana ngokugqibeleleyo nendawo ejikelezileyo yedolophu.
Ezona zinto zisetyenziswayo zenziwa ngokhuni, ngentsimbi nangekhonkrithi.
Iiposti zocingo zekhonkrithi, ngokungafaniyo neeplanga, zenziwe ngezinto ezomeleleyo kakhulu ezingaboli kwaye zivumayo ekuhlaselweni zizinambuzane..
Izithuba zekhonkrithi zomelele kwaye zihlala ixesha elide.
Zisoloko zisetyenziswa kwiifama, kwizitiya zasekhaya nasemva kwezindlu, nakwindawo zikawonkewonke ezidolophini, umzekelo Iibhodi zokupaka okanye ucingo.
Iipali zocingo zekhonkrithi nazo ziyinto engenakuthelekiswa nolwakhiwo oluncinci, kungekuphela nje kwiindawo zikawonke-wonke, kodwa nakwindawo zabucala.
Uthango kuthiwa lusebenza kakuhle xa luqhuba kakuhle izithuba zocingoezenza ukuba ziphakame. Izixhobo eziza kwenziwa kuzo zikuvumela ukuba ubone amandla kunye nokusebenza kwabo. Iifestile zocingo zingenziwa ngokhuni, ngentsimbi, ngekhonkrithi okanye ngentsimbi yentsimbi.
Bahlukile kwixabiso, ukuqina, ukufakwa kalula kunye ne-aesthetics.
Nangona imivalo Ikhonkrithi Bahlala ixesha elide, ukungalungisi kwabo kukungxwelerha kunye nokuqhekeka rhoqo. Ukuba amanzi aqokelela kwindawo yokuqhekeza, ingabanda ebusika kwaye ibangele ukuba iinxalenye zeposi ziqhume.
Abanye abantu bakhetha ukusebenzisa izithuba ezenziwe zezinye izinto, kubandakanya: yentsimbi, yentsimbi okanye iinkuni.
Izithuba zekhonkrithi zihlala zibiza kakhulu kunezobalingane bazo, kodwa azidingi kulondolozo lonyaka kunye nokufakwa ngaphakathi.
Icala elisezantsi kukuba Mediocre iposti ekhonkrithi inobunzima obungama-40 kg, okonyusa iindleko zokuhlangana, nangona kwelinye icala, iiposti zekhonkrithi zibonelela ngenkxaso eqinileyo.
Iibhodi zekhonkrithi zingathengwa kwiivenkile zokuphucula izindlu okanye ngokuthe ngqo kumenzi, ezinikezela ngokubanzi kwiimveliso ezinokuqina okungaphezulu kunye noyilo oluqhelekileyo.
Izithuba zekhonkrithi Uyilo lweFomu yeSixeko
Uyilo lweSixeko lweeBollards zekhonkrithi zibonakaliswe kuyilo lwangoku, kwaye umgangatho ophezulu weemveliso uqinisekiswa ngokutshekishwa rhoqo kwezinto kunye neenkqubo zetekhnoloji.
Inkampani yethu isebenza kakuhle I studio zokuzoba nabaqulunqi, abaqinisekisa eyona ndlela isemgangathweni kunye nokusebenza kwezinto ezincinci zokwakha eziveliswe yiyo.
Uyilo lwesiXeko ngummeli okhethekileyo weenkampani zase-Itali iMetalco kunye neBellitalia ePoland.
I-Metalco ibonelela ngokubanzi ngegadi encinci kunye neemveliso zoyilo zesixeko ezenziwe ngentsimbi kunye neenkuni.
Olu nikelo lubandakanya izinto zendawo yedolophu, i.e. iipaki, izitrato, igadi kunye nezikhululo.
I-Metalco ivelisa iibhentshi, iingobozi zesitrato, iiposti, iibhodi zolwazi, izembozo zemithi, iibhloko zeentyatyambo, izitena zebhayisekile kunye neentlobo ezahlukeneyo zefanitshala yesitrato, o.
I-Bellitalia yenye yeenkampani eziphambili zokwenza imveliso ikhonkrithi, marble kunye nelitye lendalo elihlanganisiweyoesetyenziselwa ukwenza izinto zefanitshala yasesitalatweni.
Inkampani yasekwa ngo-60 e-Italiya kwaye isahlulwa ziimveliso ezikumgangatho ophezulu, izinto ezintsha kunye noyilo lwangoku.
I-BELLITALIA Srl ivelisa izinto zokwakha iidolophu ezincinci. Kukho iibhentshi zekhonkrithi profiles, iibhodi zolwazi, ikhonkrithi kunye namatye amatye, imithombo, izithuba ezithintela izithuthi kwiindawo zokudlala kunye nendawo yokudlala, kunye nekhonkrithi, ilitye okanye ilitye lokulinganisa ilitye, elaziwa kwihlabathi liphela.
I-Bellitalia ivelisa kwaye ithengise amakhulu ezinto ezisebenzayo nenhle, zilungele ngokufanelekileyo nayiphi na indawo yedolophu.
Ukuphucula ingqokelela, izixhobo ezintsha zongezwa kwiiprojekthi ezivelayo: isinyithi, isinyithi kunye neenkuni ngendlela ehambelana nekhonkrithi kunye nokwenza isitayela esitsha ngokupheleleyo.
Ekuveliseni kwayo, i-BELLITALIA® nayo isebenzisa izinto ezinamatye anqabileyo kunye nemarble edibanisa umbala otyebileyo kunye nokubonakala komlinganiso.
Namhlanje iBellitalia iyakhokela kwimveliso nasekuthengiseni ifanitshala yesitalato. Isebenzisa izixhobo ezinje ngeentlobo ezahlukeneyo zekhonkrithi (HPC, UHPC), ukubuyisa amatye emarble yendalo, igreyiti edityanisiweyo, ikhonkrithi emenyezelayo, umthi kunye nentsimbi.
Izinto zokwenziwa kwekhonkrithi ezisetyenziswa yi-BELLITALIA® zivela kwiiDomomites ezijikelezileyo. Oku kuvumela ukuba kusetyenziswe i-oyile ephantsi kunye nokukhutshelwa kwe-CO2 ephantsi kwezothutho lwabo.
Izixhobo ezisuka kwiitera zase-Itali ziphinda zisetyenziswe kwaye zisetyenziselwa ukuvelisa amatye axabisekileyo.
Ikhonkrithi eveliswe ngale ndlela yinto eguquguqukayo, eyomeleleyo kunye nephindwayo, ngoko ke inani lokuphinda lisetyenziswe alunamda.
Ngo-2015, iBELLITALIA® iphuhlise indlela yokuyila I-Ultratense Concrete ®.
Yinto entsha ekuvumela ukuba wenze izinto ezinomdla nezinomdla ezisetyenziswa kwindawo kawonkewonke wedolophu.
I-Ultratense Concrete ® luphawu lokuthengisa olubhalisiweyo lweBellitalia kuphela. Yaphuhliswa ngokudibeneyo kwezenzululwazi ezivela kwiFakhalthi yezeMali, ezoBume beNdawo kunye nezoBunjineli baseDolophini kwiDyunivesithi yaseMarche (SIMAU) kunye ne studio ezidumileyo zehlabathi.
Izinto eziphathekayo ezenziwe ngekhonkrithi ezenziwe ngokusetyenziswa kweetekhnoloji zeUtratense Concrete® zamva nje zeplastiki kwaye enkosi kwiipropathi zayo zinokuphoswa kwisikhunta.
I-UTC ® yinto enezinto zoomatshini ezilungileyo kakhulu, ezenza ukuba ukuveliswa kweemveliso kube neendawana ezicekeceke kunye nendawo egobile emacala mathathu.
5 / 5 ( 28 iivoti )
iiposti zekhonkrithiiziseko zekhonkrithiiipali zekhonkrithi yocingoIimbumba zezithuba zekhonkrithiiingcingo, izithuba zekhonkrithipatentiiposti zekhonkrithiizithuba zekhonkrithi zenqanawaixabiso lekhonkrithiUluhlu lwexabiso lekhonkrithiiipali zekhonkrithi yocingoizithuba zekhonkrithi zokubiyela ipaneliiiposti zekhonkrithi kwigadi yeziqhamoiiponkrithi zekhonkrithi zomnathaizithuba zekhonkrithi zokwenza umnatha emahlathiniiipali zekhonkrithi yocingoimihlobiso yekhonkrithi yokuhombisaIibhodi zokupaka ikhonkrithiizithuba zekhonkrithi phantsi kwetreythiiiposti zekhonkrithi phantsi kwexabiso lentengoImilinganiselo yekhonkrithiizithuba zocingoiipali zekhonkrithi yocingoIzithuba zocingo zekhonkrithi yentsimbiIibhodi zokupakaIibhodi zokupaka ikhonkrithiIkhonkrithi ye-Ultratense